Nhau - Aya matanhatu nyanzvi dzevhudzi hacks * ipapo ipapo * kuwedzera vhoriyamu uye ukobvu kune rako bvudzi
Kunyangwe iwe urikutsvaga kutevedzera makumi matanhatu makumi matanhatu bouffant, amp ante pane yakasarudzika updo kana kungo gadzira imwe tousled kufamba mukati mehurefu, voluminous bvudzi harimbobuda kunze kwechitaira. Asi kana iwe wakazvarwa uine bvudzi rakanaka, kana bvudzi rako rave kutetepa pamusoro pemakore, kuzadzisa vhoriyamu iwe yaunoda zvinoita kunge zvisingaite pasina kudzosera midzi yako mukukanganwa.
Uyezve, nekunetsekana kwe2020 kwakabatanidzwa nenyaya dzenguva refu dzehutano dzakabatana neCovid-19, vanhu vazhinji kupfuura nakare kose vari kuzivisa kubviswa kwebvudzi uye kurasikirwa nevhudzi. Kunyanyisa kudurura bvudzi, kuchipatara kunozivikanwa se telogen effluvium (TE), chimiro chenguva pfupi alopecia kana kurasikirwa nevhudzi kunokonzerwa nehomoni kushushikana kana kwakanyanya systemic hutachiona.
Paavhareji, munhu ane angangoita 5-10% yebvudzi ravo mune izvo zvinozivikanwa senge chikamu chetereogen, inova iyo bvudzi parinodonha robva radonha. Nekudaro, mumwe munhu ane TE anozove neanosvika makumi matatu muzana yebvudzi ravo muchikamu chetelogen, zvichikonzera kuwedzera kunoonekwa mukurasikirwa kwebvudzi uye kuoneka kwekuonda.
Neraki, pane zvinhu zvinoverengeka zvaunogona kuita, zvese kumba uye nerubatsiro rwevhudzi rako, kusimudzira vhudzi vhudzi uye kugadzira kuoneka kweakasikwa ukobvu. Tashevedza kune vakanakisa mubhizinesi kuti vagovane yavo isina musoro bvudzi vhoriyamu hacks…
BHUKU MU KUSVIRA MICRO-CHIMWE
Sekureva kwemukurumbira bvudzi stylist uye muridzi wesalon George Northwood, chimwe chezvinhu zvakanakisa chaungaite kukwidziridza vhoriyamu ndeyekuverengera mukati yenguva dzose micro-trim kune vako vanogadzira vhudzi. "Kuti tiwedzere vhoriyamu kune rakatsetseka kana rakatetepa bvudzi, kutanga tinoda kuwedzera kune iro bvudzi kugadzirwa kuti riite uye rinzwe kukora," anodaro. "Micro-trims yakanaka pane izvi, kungotora miniti miniti inogumisa bvudzi rako masvondo matanhatu ega ega kunogona kubatsira kuti vhudzi rioneke rakakora uye riine hutano. Kuchengeta iyo ipfupi kureba kunogona zvakare kupa kunyepedzera kwemusoro wakakora webvudzi. Iye zvino unenge uine hwaro hwakakura hwekunyora uye kuwedzera vhoriyamu. ”
Mitsara inogona kutaridzika kushamisa (kesi mune poindi, Rachel kubva Shamwari), Asi kana iwe uchida kugadzira yakanyanya kuwanda vhoriyamu, zvidimbu haisi zano rakanaka. “Kudyara zvakawandisa kunogona kutora vhoriyamu yose kubva mubvudzi kuita kuti iratidzike kunge yakati sandara uye isina hupenyu. Zano rangu nderokuchengeta vhudzi rakatetepa urefu hwese. Zvakanakisa bhururu ipfupi, yakareba kusvika pamapfudzi kana chero mhando yechimiro chisina kujeka inogona kuumba chimiro chakakora, chakazara, ”anodaro George.
GADZIRA KODZERO KODZWA KWENYAYA YENYU YENYU
Nepo micheka midiki uye zero zero marongero ari hwaro hwakakura hwebvudzi rakazara rinotaridzika, iwe zvakare uchada kuve nechokwadi chekuti unosarudza rakatemwa rakatemerwa kuti rifanane nerudzi rwebvudzi rako.
"Kana uine vhudzi rakanaka, zvese ndezvekuwedzera kana kuchengetedza mabhureki ako," anodaro Larry King, nyanzvi yepamusoro yekunyora bvudzi, muridzi wesalon uye munyori weGLAMOR. “Kuchengeta vhudzi richitarisa kuzere nedenderedzwa kwakanakira kugadzira vhoriyamu. Kana iwe uine vhudzi rakamonana, saka iwe unoda blunter rakatemwa nematanho mashoma. Izvi zvinogadzira zvakatsanangurwa, makomo akakurisa. "
BACKCOMB NZIRA YAKARURAMA
Backcombing ndeimwe yeinokurumidza, yakachipa uye yakavimbika nzira yekugadzira ipapo uye inonakidza vhoriyamu. Nekudaro, inogona zvakare kukonzera kusagadzikana nevhudzi, kunyanya kana zvanaka, kuchisiya rakakanganisika uye rakapwanyika, izvo zvinogona kukonzeresa kurasikirwa nevhudzi.
Nekudaro, sekureva kwenyanzvi, zvinokwanisika kudzosera kumashure munzira isingakuvadze bvudzi. "Uchishandisa muzinga, isa mukati-kati mebvudzi rako uye nyatsosundira pasi kumudzi," anodaro George. "Usafambise muzinga kumusoro uye pasi pachikamu chimwe chebvudzi sezvo izvi zvichikonzera kukuvadza uye kugadzirisa chaizvo backcomb nebasa rako rese rakaoma."
Nezve kwaunofanirwa kunge uchidzosera kumashure, zvakanak kutora nzira yakanangwa. “Chete backcomb yezvikamu chero kwaunoda zvishoma zvishoma 'umph' uye nekukwirira. Izvi zvinowanzove pakorona kana pamudzi, zvinoenderana nemabatiro auri kuenda, ”anopa zano George. “Usati warwisa shure, bata chikamu chimwe nechimwe chebvudzi kumusoro uye pfapfaidza mushonga kana bvudzi mumidzi. "Kana ukasashandisa chigadzirwa usati warohwa nemusana, vhudzi rinogona kunzwa richitsvedza zvakanyanya, rinoda kugadzirwa kuti riwedzere kubata."
Shandisa IN THE BEST PRODUCTS
Iko kune mashoma mashoma zvigadzirwa izvo zvinodaidzwa nenyanzvi kuti vagadzire vhoriyamu mumasekondi. "Ndinopika neVolumizing Hair Mist yangu," anodaro Larry. "Zvakanaka kuwana huwandu hwakawanda hwevhoriyamu pasina kusiya masara anonamira asi uchichengetedza kubatika uye kufamba. "Chigadzirwa ichi chakanakisa pane bvudzi rakaoma, chinogona kumwayirwa mumidzi kuwedzera vhoriyamu pakati pezuva kana kuti paunenge uchida kumisazve fashoni yako."
Chigadzirwa chepamusoro chaGeorge chekugadzira vhoriyamu Bvudzi naSam McKnight Lazy Musikana Bvudzi Spray. "Isa imwe shampoo yakaoma iyi kumidzi yako uye upfuure vhudzi rako nebvudzi rebvudzi kweminiti, uku kubhejera nekukurumidza kunozomutsiridza bvudzi rako uye kuwedzera vhoriyamu usati wagadzira pasina kuisuka," anodaro.
Post nguva: Aug-10-2020